Galmudug 5 sano kadib gadaal ma u soconaysaa? -
Galmudug 5 sano kadib gadaal ma u soconaysaa? –
MW DG Galmudug Axmed Cabdi Kaariye
Dowlad goboleedka Galmudug ayaa ku jirta xaalad isbedel ah. Astaamaha ugu waaweyn ee dib u dhaca dowladnimo waxaa ka mid ah la’aanta ciidan amni oo ka shaqeeya amniga iyo xasilloonida Galmudug!
Sida ku cad qodobka 126aad ee dastuurka, Dowladaha xubinta ka ah Federaalka waxaa loo oggol yahay inay yeeshaan Boolis u gaar ah iyo noocyo kale oo ciidan ah marka laga reebo Ciidanka Qaranka Soomaaliyeed. siyaasadeeda iyo jihada ay udub dhexaadka u tahay dowlada federaalka.
DG Galmudug 5 sano oo ay kujiraan Dowlad Goboleedyada labada heer ee Dowlada Federaalka! Wali maanaan helin booliis ama ciidan kale oo u xilsaaran amniga deegaanada maamulka, tanina maahan wax qarsoodi ah oo aan loo ogoleyn shacabka inay ogaadaan, waxaad isweydiin kartaa yaa qabanaya shaqada Galmudug booliis magac iyo madaxba wuu jiray laakiin macno la’aan iyo muuqaal ah!
Dalku wuxuu isu diyaarinayaa inuu codeeyo oo u codeeyo Madxatooyada Galmudug isla mas’uuliyiinta degmada Muqdisho, Maareynta Amniga iyo Amniga waxaa si toos ah u maareeya saraakiisha millatariga iyo booliska, kuwaas oo intooda badan ku sugan gobolka! In kasta oo loo yaqaan Wasaaradda Amniga iyo taliyaha booliiska Puntland oo aan jirin wax xafiis ah oo loogu magacdaray looga-xaadiri karo shirarka iyo arrimaha siyaasadda, waxayna taasi ka hor imaanaysaa dhammaan shaqada iyo waajibaadka hogaamiyayaasha hay’adaha dowladda iyo Galmudug shaqadoodu waa inay waxay horseed u tahay dhismaha hay’ado dowladeed oo shaqeynaya kadib markuu dhamaado maamulka hada jira ee Galmudug.
Galmudug: Amniga & Doorashooyinka
Horaantii iyo bartamihii bishii Diseembar ee sanadka 2020, diyaarado sida ciidamo iyo hub ayaa ka degay magaalada Dhuusamareeb ee xarunta maamulka Galmudug. Tusaale ahaan, labadii toddobaad ee ugu horreeyay Disember 2020, laba diyaaradood oo kuwa rakaabka ah ayaa ka degay Dhuusamareeb. , ujeedka ciidamada dowladda dhexe loo geeyay Dhuusamareeb waxay la xiriirtaa doorashada baarlamaanka Federaalka.
Dabayaaqadii bishii Diseembar ee sanadkii 2020, waxaa soo baxay warar sheegaya in dowladda ay ciidamo iyo diyaarado geysay magaalooyin loo qorsheeyay in lagu qabto doorashada baarlamaanka, sidaa darteed wasiiru dowlaha amniga Farxaan Cali Axmed ayaa u sheegay warbaahinta dowladda in dowladdu ay diyaarisay qorshe amni oo gaar ah. doorashada, taas oo sida uu Farxaan qabo ah heshiis u dhexeeya hogaamiyayaasha dowlad goboleedyada iyo dowladda federaalka.
Amniga doorashooyinka 2021-ka waxaa iska kaashanaya dowladda federaalka iyo dowlad goboleedyada, booliska gobolka, ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed iyo howlgalka midowga Afrika ee AMISOM si ay gacan uga geystaan ​​sugidda amniga doorashooyinka dadban ee 13-ka gobol ee dalka. (Doorashooyinka dadban ee dalka oo dhan).
Dawlad gobaleedyadu ma lahan boolis u gaar ah sida Galmudug! Amniga doorashada waxaa iska leh Booliska iyo Milatariga Federaalka! Tani waxay horseedi kartaa in hogaamiyayaasha dowladda dhexe ay ka faa’iideystaan ​​awooddooda si ay go’aan uga gaaraan cidda baarlamaanka Galmudug ka soo galaysa Galmudug.
Iskusoo wada duuboo, marka la barbardhigo doorashooyinka gobolada 2016 iyo 2021, farqi weyn ayaa udhaxeeya labada doorasho. Bishii Oktoobar, 2016, magaalooyinkii ay ka dhacday doorashada baarlamaanku waxay ku beegnaayeen doorashadii baarlamaanka, sidaas darteed dhaqaalaha doorashada ayaa door weyn ka ciyaaray. Kordhinta kororka magaalooyinka iyo socodka ganacsiga laakiin sanadka 2020/2021 dowlad goboleedyada Galmudug, Hirshabeelle & Koonfur Galbeed ma arkin olole doorasho oo cad waxayna ku qulqulayaan diyaaradaha sida hubka iyo ciidamada, labada dowladood ee kale (Puntland iyo Jubbaland) way wada shaqeynayeen. . ma jirto dowlad dhexe oo shaqeysa.
Taariikhda kooban ee siyaasada federaalka waxay na baraysaa in hogaamiyayaasha maamul goboleedyada ee u ololeynaya in dib loo doorto madaxweynaha xilka haya ay waayi doonaan xilalkooda doorashada kadib, laakiin Qoorqoor wuxuu umuuqdaa inuu xilka ka dagi doono kahor doorashada.
Halkan waxaa ah go’aanka ugu dambeeya ee Manchester United